Toledo ၏လှပသောမြို့များ- Escalona မှ La Puebla de Montalbán | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 13/05/2022 15:00 | ခရီးသွားလုပ်ငန်း, Espana
ဖြတ်သန်းဖို့ ခရီးတစ်ခု စဉ်းစားရင် Toledo ၏လှပသောမြို့များအများကြီးရှိလို့ ရွေးရမှာပေါ့။ La Mancha ၏ Castilian ပြည်နယ်သည် အခွင့်ထူးခံသဘာဝတရားကြီးတစ်ခုရှိသည်။ Montes က de Toledo နှင့် Tagus နှင့် Tiétar မြစ်များပထမဦးစွာတက်အဆုံးသတ်သော။
သို့သော် အားလုံးထက်၊ Toledo လွင်ပြင်သည် သမိုင်းကြောင်းနှင့် အထိမ်းအမှတ်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော လှပသောမြို့များရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ နှိုင်းမယှဉ်နိုင်သော နက်နဲသောစာပေအမြစ်များပါရှိသော ရှုခင်းများပါရှိသည်။ Don Quixote ဤနိုင်ငံများတွင် သူ၏စွန့်စားခန်းများစွာကို နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံးသည် သင်ကောင်းစွာသိထားသင့်သော ပြည်နယ်တစ်ခုကို စီစဉ်ပေးသည်။ သင့်တွင် လမ်းညွှန်တစ်ခုရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လှပသောမြို့များကို ရွေးချယ်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ Toledo.
2 လှပသော Toledo ၏နောက်ထပ် Orgaz
3 Ocaña နှင့် ၎င်း၏လှပသော ပလာဇာမြို့တော်ဝန်
5 Escalona, ​​​​Alberche ၏ဘဏ်များ
La Puebla de Montalbán၏ပလာဇာမြို့တော်ဝန်
စာပေပဲ့တင်ထပ်ခြင်းအကြောင်းပြောရင် ဒီမြို့က ပုခက်ပါပဲ။ ဖာနန်ဒိုဒီရိုဂို၏အာဘော် la Celestina။ ပိုင်၏ Torrijos ၏ဒေသပြည်နယ်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် နီးပါးရှိပြီး မြေသြဇာကောင်းသော တန်ဂတ်ချိုင့်ဝှမ်းအထိ၊
သို့သော် La Puebla သည် ၎င်း၏ ကျယ်ပြောလှသော အမွေအနှစ်များအတွက် ထင်ရှားသည်။ အာရုံကြောဗဟိုချက်အနေဖြင့် ပလာဇာမြို့တော်ဝန်ပုံမှန်အားဖြင့် Castilian၊ သင်မြင်နိုင်သည့်အရာ ငြိမ်းချမ်းရေး၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်းRenaissance မှ Gothic အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်သည်။ မြို့တော်ခန်းမ အဆောက်အဦနှင့် ရင်ပြင်တို့တွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။ Montalbán၏ Counts ၏နန်းတော်Plateresque အထိအတွေ့များဖြင့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော Renaissance ဆောက်လုပ်ရေး၊
ပထမဦးဆုံး Baroque နှင့် ဒုတိယဂန္တဝင်ဖြစ်သည့် Nuestra Señora de la Soledad နှင့် Santísimo Cristo de la Caridad တို့၏ သင်္ခမ်းများကို ဤမြို့၌လည်း သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ Franciscan ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် Conceptionist သီလရှင်များနှင့် Saint Michael's Towerမြို့၏အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည့် ဘုရားကျောင်းဟောင်းတစ်ခု၏ ကျန်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့် အတိအကျပြောရရင်တော့ သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။ Celestine ပြတိုက် စာရေးဆရာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စာများ၏ ဤကြီးစွာသောအလုပ်၏ လူမှုရေးအခြေအနေတို့ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန်။ La Puebla ကထွက်ရင် မင်းမှာရှိတယ်။ တန်ခူးတံတားXNUMX ရာစုမှစတင်တည်ရှိပြီး ရှစ်ကီလိုမီတာခန့်အကွာတွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ Burujon CanyonsColorado ၏ Grand Canyon ကိုသတိရစေမည့် capricious ရွှံ့ပုံစံများ၊
လှပသော Toledo ၏နောက်ထပ် Orgaz
Castillo de Orgaz၊ Toledo ၏အလှဆုံးရွာများထဲမှတစ်ခု
Sierra de Yébenes ၏ခြေရင်း၌တည်ရှိသည်။ Sisla ဒေသ ၎င်း၏ အထင်ကြီးလောက်စရာ အမွေအနှစ်အဖြစ် Toledo ၏ လှပသောမြို့များတွင်လည်း ပါဝင်သည့် ဤလှပသောမြို့ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏ Orgaz ၏ခရီးစဉ်ကိုစတင်ရန်၊ သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ပလာဇာမြို့တော်ဝန်ဒါပေမယ့်လည်း Santo Tomas Apostol ၏ဘုရားကျောင်း၊ တည်ဆောက်သည်။ Alberto de Churriguerra တစ်ဆယ့်ရှစ်ရာစု၊ နှင့် အော်ဂတ်ရဲတိုက်XIV မှစတင်ပြီးမြို့၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြင့် မီတာ နှစ်ဆယ် ရှိသော မျှော်စင်ကို သင် သဘောကျ လိမ့်မည် ။
Orgaz တွင် တံတိုင်းဟောင်း၏ အကြွင်းအကျန်များရှိပြီး ၎င်းကိုဖြတ်သွားသော တံခါးလေးခုအနက်မှ နှစ်ခုရှိသည်။ Belénနှင့် San José၏မုတ်. အလားတူ မြို ့တွင် သမိုင်းဝင် တံတားများစွာ ရှိသည့်အနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ မျက်လုံးငါးလုံး၏ကာလ၌တည်ဆောက်ခဲ့သည် ကားလို့စ် IIIနှင့် El Socorro နှင့် La Concepción ကဲ့သို့သော ဘုရားကျောင်းများစွာဖြင့်
တစ်ဖက်ကလည်း အရေအတွက်များတယ်။ သာယာသောအိမ်များ ၎င်း၏လမ်းများပေါ်တွင်လူနေ။ ဥပမာအနေဖြင့်၊ Count Tierrapilares၊ Calderón de la Barca၊ Ioseph သို့မဟုတ် Vizcaíno တို့၏အိမ်များကို ဖော်ပြပါမည်။ နောက်ဆုံးတွင် Orgaz နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် ၎င်းတို့၏ ကြီးမားလှသော ရှေးဟောင်းသုတေသနတန်ဖိုးအတွက် ထင်ရှားသည်။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် မြို့နဲ့ငါးကီလိုမီတာက ခရိုင်ပါ။ Arisgotasသင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ Visigoth အနုပညာပြတိုက်. အလားတူပင်၊ La Tocha တောင်ပေါ်၌ နှစ်ပေါင်း တစ်ဆယ့်ငါးရာကျော် သက်တမ်းရှိသော ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးကို တွေ့နိုင်သည်။ တောရက်ဂျွန် Roman necropolis နှင့် အထဲတွင် ရှိပါသည်။ Villaverde တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တံတားတစ်စင်းနှင့် လမ်းတစ်ခု၏ အကြွင်းအကျန်များကို သင်တွေ့နိုင်သည်။
Ocaña နှင့် ၎င်း၏လှပသော ပလာဇာမြို့တော်ဝန်
ခမ်းနားထည်ဝါသော ပလာဇာ Ocaña မြို့တော်ဝန်
ဤအခြားအံ့ဖွယ်မြို့သည် Toledo ပြည်နယ်၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးနှင့်ထိစပ်နေသည်။ Aranjuezသိကြတဲ့အတိုင်း မက်ဒရစ်က ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားပါ။ ၎င်း၏ အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ တစ်ခုသည် ၎င်း၏ ခမ်းနားမှုဖြစ်သည်။ ပလာဇာမြို့တော်ဝန်၁၈ ရာစုတွင် ခမ်းနားထည်ဝါသော အသွင်အပြင်ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 2002 ခုနှစ်မှစပြီး ယဉ်ကျေးမှုကို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။
Ocaña တွင် သွားရောက်လည်ပတ်ရန်လည်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရေပန်းကြီးRenaissance ရဲ့ ရတနာတစ်ခုပါ။ Juan de Herrera 1578 ခုနှစ်နှင့် Cardenas နန်းတော်တူညီသောကာလမှ၊ Gothic ၏ကျမ်းဂန်များအတိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ သို့သော် Renaissance သို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ ခေတ်ပြိုင်ဆိုတာလည်း ထပ်တူပါပဲ။ Lope de Vega ပြဇာတ်ရုံယေရှု၏အသင်းတော်၏ကောလိပ်ဟောင်း။
တစ်ဖက်တွင်၊ Ocaña တွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ဘာသာရေး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံများ ပြတ်တောက်မှု မရှိပါ။ ဟိ Santa María de la Asunción ၏စီရင်စုဘုရားကျောင်း ၎င်းကို XNUMX ရာစုတွင် နီယိုဂန္ထဝင်ပုံစံဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို ယခင်ဗလီဟောင်းတစ်ခုမှ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဟိ San Juan Bautista ၏စီရင်စုဘုရားကျောင်း ၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းသည် XIII တွင် ရက်စွဲပါရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် အသက်ကြီးသည်။ ၎င်းကို Toledo ၏ Mudejar အနုပညာတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
La San Martin ဘုရားကျောင်း ခေါင်းလောင်းမျှော်စင် ၎င်းသည် ကျန်ရှိနေသော တစ်ခုတည်းသောဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားအဖြစ် ကြေငြာထားသည်။ XNUMX ရာစုအကုန်တွင် Herrerian ပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အလားတူ၊ Ocaña သည် သင့်အား ခမ်းနားသော သမားရိုးကျ အဆောက်အဦများကို ပေးဆောင်သည်။ ယင်းတို့အနက် Santo Domingo de Guzmán နှင့် Santa Catalina de Siena တို့သည် Renaissance စတိုင်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်သည်။ ရောမခေတ်ကဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရေပန်းဟောင်းကို သင်အစွန်အဖျားတွင် တွေ့ရပါမည်။
နောက်ဆုံးတွင် Ocaña တွင်လည်း စာပေအမြစ်များရှိသည်။ ဒွန်ရွာမှာ သေဆုံးသွားတယ်။ Rodrigo Manriqueသားတော်အား လှူအပ်သော၊ Coplas သူ့ဖခင်၏အသေခံခြင်းငှါ. ဤမြို့သည် ထင်ရှားသော လက်ရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Lope de Vega Peribáñezနှင့်Ocaña၏တပ်မှူး. မလုံလောက်သလိုပဲ သူအဲဒီမှာမွေးတယ်။ Alonso de Ercilla၏အာဘော် Araucana.
Tembleque ရှိ မျှော်စင်အိမ်
၎င်းသည် Toledo ပြည်နယ်၏အရှေ့ဘက်နှင့်၎င်း၏မြို့တော်မှငါးဆယ့်ငါးကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင် ပေးဆောင်သည်။ ပလာဇာမြို့တော်ဝန် ပုံမှန်အားဖြင့် La Mancha မှဖြစ်သည်။ စတုရန်းထပ်အစီအစဥ်ဖြင့် ၎င်း၏အပေါ်ပိုင်းတွင် ကော်လံများနှင့် စင်္ကြံများပံ့ပိုးပေးသည့် အပေါက်များရှိသည်။ XNUMX နှင့် XNUMX ရာစုကြားတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ခမ်းနားထည်ဝါသောအသွင်အပြင်များနှင့် အဖိုးတန်သစ်သားအလှဆင်မှုများပါရှိသည်။ ဤအချက်အတွက်၊ ပင်မဝင်ရောက်ခွင့်သည် ဟစ်ထစ်ရှုထောင့်ရှိသော cantilever ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
၎င်းသည် XNUMX ရာစုမှ ခန့်ညားထည်ဝါသည်။ တာဝါတိုင်များအိမ်သမိုင်းဝင် အနုပညာ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး လှပသော မျက်နှာစာအတွက် ထင်ရှားသည်။ ထိုကာလမှသည် Postas သို့မဟုတ် တန်းလျားဟောင်းများပို၍ ကြမ်းတမ်းသော်လည်း၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Tembleque တွင်သင်တွေ့ရမည့်အရေးကြီးဆုံးသောဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ အဆိုပါယူဆချက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်း. ၎င်းကို XNUMX ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး Gothic မှ Renaissance သို့အကူးအပြောင်းအသွင်အပြင်များရှိသည်။ အပြင်ပန်းအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ခံ့ညားထည်ဝါသောမျှော်စင်အတွက် ထင်ရှားပြီး ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းတွင်၊ Jesús Nazareno နှင့် Virgen del Rosario တို့သည် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော ဘုရားကျောင်းများစွာကို ဆောက်လုပ်ထားသည်။
Toledo မြို့၏ ဘာသာရေးအမွေအနှစ်ကို La Purísima Concepción၊ Cristo del Valle၊ Loreto နှင့် San Antón တို့၏ ဘုရားကျောင်းကန်များဖြင့် ပြီးမြောက်သည်။ ဒါပေမယ့် ပိုသိချင်တာက Veracruz မှဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဋ္ဌဂံပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် အမိုးခုံးတွင် အဆုံးသတ်သည်။
Escalona, ​​​​Alberche ၏ဘဏ်များ
Castillo de Escalona၊ Toledo ၏အခြားလှပသောမြို့များ
၎င်းသည် La Puebla de Montalban ကဲ့သို့ပင် ပိုင်ဆိုင်သည်။ Torrijos ၏ဒေသဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် Alberche မြစ်ကမ်းစပ်တွင်ရှိသော်လည်း၊ ဆဲလ်တစ်၊ ရောမ နှင့် Visigoth ရုပ်ကြွင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ရှေးခေတ်ကတည်းက ၎င်းသည် လူနေဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အလယ်ခေတ်တွင်ရှိပြီး၊ ၎င်း၏ဗျူဟာမြောက်သောတည်နေရာကြောင့် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
တကယ်တော့ Escalona ရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ သင်္ကေတက သူ့ရဲ့ သင်္ကေတပါပဲ။ ရဲတိုက်-နန်းတော်ခံတပ်ကိုယ်တိုင်နှင့် Mudejar နန်းတော်တို့ ပါဝင်သောကြောင့် ဤအမည်ကို ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တည်ရှိမှုကို XNUMX ရာစုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်း၎င်းသည်ပထမဆုံးရောမခံတပ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ တစ်ဖက်ကလည်း၊ ငါတို့မင်းကို ရှင်းပြထားတဲ့ စာပေပဲ့တင်ထပ်သံတွေနဲ့ ဆက်ပြီး ပုံတိုပတ်စတစ်ခုအနေနဲ့ မင်းကို ရဲတိုက်ထဲမှာ ပြောပြမယ်။ မွေးကင်းစကလေး Don Juan Manuelငါတို့ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ အလယ်ခေတ်စာရေးဆရာ Lucanor ရေတွက်.
နေရာဒေသတွေမှာလည်း တွေ့သင့်တယ်။ San Miguel ၏တံခါးမျှော်စင်ရှိ၏ ။ အနားမှာ Saint Vincent ၏တံတိုင်းဟောင်းကနေ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အရာတွေလား။ Escalona ရှိ အရေးအပါဆုံး ဘုရားကျောင်းကိုလည်း ရှေးဦး Romanesque ဘုရားကျောင်းတွင် တည်ဆောက်ထားသော San Miguel Arcángel ထံ အပ်နှံထားသည်။ အတွင်းတွင် လှပခန့်ညားထည်ဝါသော ယဇ်ပလ္လင်တစ်ခုကို တွေ့နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ သာသနာ့ အမွေအနှစ် မြို ့နယ် ကိုလည်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ သည် Franciscan Conceptionists ၏ခရစ်ယာန်သီလရှင်. သို့သော် Escalona သည် သင့်အား ပုံမှန် Castilian စတုရန်းကိုလည်း ပေးပါသည်။ အဲဒါ Don Juan Manuel ရဲ့ဘယ်ဟာလဲ။ ကောင်စီအိမ်ယနေ့ မြူနီစီပယ်စာကြည့်တိုက်တွင် ပြတိုက်ငယ်တစ်ခုနှင့် လှပသော တီးဝိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Escalona သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဆွဲဆောင်ရန် မြို့ပြအနုပညာမြင်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ ပြန်လည်ဆန်းသစ်နိုင်ပုံကို သိထားသည်။ ၎င်း၏လမ်းများတွင် လမ်းဘေးအနုပညာရှင်များ၏ လက်ရာနမူနာများစွာကို သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Mr.Stroke. နောက်ဆုံးတော့ နွေရာသီမှာ မင်းမြို့ကိုရောက်ပြီး ရေချိုးချင်သလိုခံစားရရင် မင်းမှာတစ်ခုရှိတယ်။ Alberche မြစ်ကမ်းနားရှိ မြစ်ကမ်းခြေ. ၎င်းမှ XNUMX ရာစုမှလှပသောတံတားတစ်စင်းကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအချို့ကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Toledo ၏လှပသောမြို့များ. ဒါပေမယ့် ဒီပြည်နယ်မှာ တကယ် အဖိုးတန်တဲ့ နေရာတွေရှိလို့ တခြားသူတွေအကြောင်း ပြောပြလို့ရတယ်။ နမူနာအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အားကိုးကားပါမည်။ အော်ရိုပီဆာရဲတိုက်နှစ်ခုနှင့် လှပသော နာရီစင်တို့နှင့်အတူ၊ မကာဒါ၎င်း၏ Caliphate Gate နှင့် La Vela ရဲတိုက်၊ တိုဘိုဆို, peerless Dulcinea ၏ပြည်; ယောက္ခမ၎င်း၏ပုံမှန်အားဖြင့် La Mancha လေရဟတ်များ၊ သို့မဟုတ် အလွန် torrijosSantísimo Sacramento ၏ အထင်ကြီးစရာကောင်းသော ကောလိပ်ဘုရားကျောင်းနှင့်အတူ၊ Toledo ရှိ ဤလှပသောမြို့များအားလုံးကို သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ၎င်းတို့သည် လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်များဖြစ်သည်ဟု သင်မထင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » Toledo ၏လှပသောမြို့များ